Maaskaro iyo fayras | Dongguan Missadola technology Co., Ltd.
Waa maxay coronavirus-ka cusub?
Cudurka Coronavirus 2019 (COVID-19) waxaa lagu qeexaa inuu yahay cudur ay sababto coronavirus hadda loo yaqaan coronavirus 2 (SARS-CoV-2; horey loo yiqiin 2019-nCoV), kaasoo markii ugu horreysay lagu aqoonsadey inuu ka dillaacay xaaladaha cudur neef-mareenka. ee Wuhan City, Gobolka Hubei, Shiinaha. Waxaa markii hore loo soo wargaliyay WHO 31-ka Diseembar, 2019. Bishii Janaayo 30, 2020, WHO waxay ku dhawaaqday in COVID-19 uu ka dillaacay xaalad caafimaad oo degdeg ah oo caalami ah. Markay ahayd Maarso 11, 2020, WHO waxay COVID-19 ku dhawaaqday inuu yahay masiibo caalami ah, waana astaankeedii ugu horreeyay oo nooceeda ah tan iyo markii ay ku dhawaaqday hargabka H1N1 inuu yahay masiibo 2009.
Cudurka ay sababaan SARS-CoV-2 waxaa dhowaan loogu magacdaray COVID-19 oo ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka (WHO), magaca cusub ee loo yaqaan 'coronavirus cudurka 2019'. Magaca waxaa loo xushay in laga fogaado in lagu takooro asalka asalka ah marka loo eego dadka, joqoraafi ahaan, ama ururada xayawaanka.
Sida loo ilaaliyo coronavirus cusub
1. Dhaq gacmahaaga had iyo jeer.
2. Ka fogow xiriir dhaw.
3. Xiro maaskaro dabool leh markay jiraan dad kale oo ag jooga.
4. Dabool qufaca iyo hindhisada.
5. Nadiifi oo jeermis dil.
Dhibaatada noocee ah ayaa xallin kartaa maaskareenayada gaashaanka ah ee loo yaqaan 'coronavirus'
1. Yaree oo kahortag caabuqa coronavirus.
Sababta oo ah mid ka mid ah dariiqyada gudbinta cudurka cusub ee 'coronavirus' waa gudbinta dhibcaha, maaskaro kaliya kama hor istaagi karto taabashada xiriiriyaha fayraska inuu ku buufiyo dhibco, yareynta cabirka dhibcaha iyo xawaaraha buufinta, laakiin sidoo kale wuxuu xayirayaa nudaha dhibcaha ee ka kooban fayraska, ka hortagga kuwa xiiran. ka neefsashada.
2. Ka hortag faafinta dhibcaha neefsashada
Xawaareynta dhibicdu masaafad aad u dheer uma badna, badiyaa kama badna 2 mitir. Xaddiga ka weyn 5 micron oo dhexroor ah ayaa dhaqso u deg degi doona. Haddii ay aad isugu dhowyihiin, dhibcuhu waxay ku dhici doonaan xuubka midba midka kale iyadoo loo marayo qufaca, hadalka iyo dabeecadaha kale, taas oo keenta infekshin. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo masaafada bulshada qaarkood.
3. la xiriir caabuq
haddii gacmaha si lama filaan ah ugu wasakhaysan fayraska, indhaha xoqida waxay sababi kartaa infekshan, sidaas darteed xiro maaskaro oo gacmaha dhaq mar kasta, taas oo sidoo kale aad waxtar u leh yareynta gudbinta iyo yaraynta halista infekshinka shaqsiyeed.
Ha taaban maaskaro oo ay isticmaaleen kuwa kale maxaa yeelay way iskaga gudbi karaan.
Maaskaro la isticmaalay waa inaan loo dhigin si aan caadi ahayn. Haddii toos loogu dhejiyo boorsooyinka, jeebka dharka iyo meelaha kale, caabuqa ayaa laga yaabaa inuu sii socdo.
Sida loo xiro maaskaro difaac iyo maxaad u fiirsaneysaa?